Fidirana Amin’ny MSN Space ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2018 2:14 GMT
Maro ny olona nilaza fa tsy afaka miditra amin'ny blaogy MSN Space-ny na miatrika fahasarotana amin'ny fidirana, ao anatin'izany i Nina Wu, anabavin'ilay blaogera voasambotra sady mpiara-miasa amin'ny Global Voices Hao Wu, miaraka amin'ny blaogera MSN maro nanamarina ilay olana (1,2).
Araka ity lahatsoratra ity, ao amin'ny Live.com no mipetraka ny tsy fahafahana miditra amin'ny MSN Space. Navadiky ny Microsoft ho Live.com ny dingana fidirany .NET Passport , izay nangataka an'ireo Sinoa mpampiasa mba handeha ao amin'ny live.com hanoratra ny mombamomban'ny kaontiny ary mety voasakana ao Shina ny Live.com. Noho izany, tsy afaka nidirana mihitsy ireo tranonkala rehetra nifandray tamin'ny MSN nandritra izay herinandro maromaro lasa izay.
Manome fomba hafa vitsivitsy hahafahanao miditra sy manohy ny fampiasana tranonkala MSN tsy mila miditra amin'ny proxy toy ny vita lisitra eto ambany ihany koa ity lahatsoratra ity:
nampiasàna ny protocol https
nampiasàna ny tolotra .NET Passport orizinaly: ary nampiasàna Messenger 7.0 mba hidirana amin'ny Hotmail sy MSN Space
Mampiseho zavatra roa ny fanandramana: voalohany, taorian'ny nampiasana ireo teknika teo ambony ireo mba hidirana amin'izy ireny, miverina amin'ny laoniny ny MSN sy ny Hotmail; faharoa, amin'ny alalan'ny proxy toy ny an'ny Tor irery ihany no ahafahana miditra amin'ny Live.com.
Andro maromaro talohan'izao, nitsahatra nandritra ny fotoana voafetra ilay fanakanana, saingy niverina tao anatin'ny andro vitsy taty aoriana. Mbola tsy mazava foana hatreto hoe noho ny fahasimban'ny sehatra fampiantranoana ao amin'ny Sampana Microsoft ao Shina ve ity olana ity. Toa adaladala izany fanakanana izany miaraka amin'ilay fitsidihana vao haingana nataon'ny Filoha Hu Jintao tany amin'ny Mlicrosoft sy Bill Gates. Mbola tsy misy fanamarinana avy amin'ny Microsoft aloha hatreto.